Wasiirka Maaliyadda Itoobiya Axmed Shidde oo gaaray magaalada Berbera – Radio Daljir
Wasiirka Maaliyadda Itoobiya Axmed Shidde oo gaaray magaalada Berbera
Juunyo 24, 2021 11:08 b 0
Wafdi ka socda dowladda Itoobiya oo uu hoggaaminayo Wasiirka Maaliyadda Axmed Shide ayaa gaaray magaalada Berbera ee maamulka Somaliland, iyadoo wafdigana uu ka mid yahay Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar.
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa kusoo dhaweeyay magaalada Berbera wafiga uu hogaaminayay Wasiirka Maaliyada Itoobiya, waxaan lasocday madaxweynaha DDS Mustafe Muxumed Cagjar.
Wafdigan ayaa ka qeyb galaya xaflada xariga looga jarayo Dekeda Berbera oo Shirkadda DP World ay ku sameysay dib u casriyeyn iyo ballaarin Dekeda Berbera oo dhowaan dib loo howli doono.
Heshiiskii saddex geesoodka ee sanadkii 2018 dhex maray Shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta, Somaliland iyo Itoobiya ayaa dhigayay in 51% saamiga horumarinta Dekeda ay yeelato DP World, 30% ay yeelato Somaliland, halka dowladda Itoobiya ay yeeaneyso 19%.
Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Galmudug & Safiirka UK ee Soomaaliya?